Drábské Rooms ndivo vakasara chokutanga yemapuranga Castle pamusoro sandstone kutigumbura ari cadastral Dneboh muruwa nuori Boleslav, 4? Km kumabvazuva Munich Hradiste. Zvinowanikwa munzvimbo dzakachengetedzwa munzvimbo kuCzech Paradise, pamusoro munharaunda European kukosha Natura 2000 uye zvakasikwa kuchengeterwa Příhrazské matombo. Dombo simba yakavakwa kumusoro kumucheto kuchikuva anonzi Castle pagungano kukwira anenge 370 M (105-155 metres unyatsoshanda rwizi Jizera). Castle kubva 1958 akadzivirira sesangano nemagariro Monument yakakura, kufukidza rakasiyana nzvimbo dzinonakidza chete pedyo Klamorna. Muridzi pfuma zvakaoma wenhare ari Czech Republic, utariri uye vatarisire shongwe chendangariro Masango of Czech Republic.
Kusimbiswa yakagara vasingazivikanwi zita rakavakwa matongo chinyorwa nguva munguva wechipiri 13. panguva yemabasa makuru ekukoloni kweCistercian Castles. Drábské Rooms vane pedyo Klamorna uye rusvingo Old Castle Příhrazy kanenge pakutanga akashumira murindi pfungwa, vakarinda wemamongi ndima uye chikamu Pojizerské mudungwe munzira. Zviwanikwa zvakawanda zvekuchera matongo zvinoratidzira kuvapo kweimba kusvikira 14. zana remakore uye zvishoma zvishoma mu15. muzana remakore, apo inofungidzirwa kuti inodzorerwa munguva dzeHussite hondo.
Kushandiswa kweszvimbo yakavezwa munguva yekare yemakore ino zvakare yakanyorwa nemaprogrogfu anonzi histori. Mamwe matsamba kubva ku16. uye 17. mazana ezviuru pamwe chete nekunyorwa kwezvinyorwa zvakanyorwa kunobvumira misangano yemitezo ehukama hwakabatana uye nekugona kunogona kwevapristi veUtrakvistic. Mhedzisiro yeimwe dombo inoputika uye sarudzo yekutanga yeimba yakashandura migodhi ye sandstone mabhuti.
Nhare iyi yakavakwa pamatombo mashanu kana manomwe, akaparadzaniswa nemapukani mashoma. In dzakasiyana siyana 15-40 M yakakwirira matombo anochengetwa wakavezwa nzvimbo maviri akasiyana kushanda, shanu residues corridors yakavezwa nheyo emapuranga pashure nomwe nezvivakwa uye mabhiriji uye shanu akavezwa muchimwiro achiratidza yakanyatsoti emapuranga palisades. Kumucheto dombo kunogonawo vakiridza emapuranga walkways pakati kutigumbura anochengetwa dragee mukuvhara makatsemuka. Inotonga marongerwo yose yaiva hombe yemapuranga shongwe kudzivirira pamusuo wenhare ari kumisa kana drawbridge. Mukova wepakati pekare wakatungamirirwa kubva kumabvazuva kubva pamatombo akazotevera kuenderera mberi kwedombo. Nzvimbo huru yeimba iyi ndiyo temberi - imwe imba ine aritari yakavezwa, isina kufuka mu1921.
Drábské světničky inzvimbo inozivikanwa yevatariri. Yanhasi mushanyi kuwana pasi-sculpted dombo mutswe kunge iri 1830, ari pamasitepisi yakapiwa ari maviri remakore rechimakumi maviri, ari Club of Czechoslovak Vashanyi. Nhasi, chikuru chikamu okumusoro zvikamu matombo inoperera interconnected hurongwa Manera uye mabhiriji (rwokuparidza).
Rwendo rweimba yakasununguka uye runomhanya pasina mutungamiri. Rwendo rwokuona nzvimbo runotanga nechiteshi chemukova, rinogadziriswa mu2016. Iyi chikamu chechivigiro chinogara chiripo kune vashanyi vanobva ku1. April kusvika 31. Gumiguru, masikati, asingakwanisi mamiriro okunze.
Nzira pfupi kune dombo guru rinotevera chiratidzo chechivara chebhuruu kubva kuKavčina motokari mumusha weDneboh (0,6 km). Iko kunogara kwechitima imomo mumusha weBrzina pamuganhu 070 Prague-Turnov iri munzira yakatsvaira kubva kure dombo reimba 2,5 kilometer.
Nzvimbo yekumakomo yeDrábské světničky inoumba chikamu chekumusoro-ntshona chePříhrazská Highlands pakati pekamba Na Krásné vyhlídce neKlamornou. Makiromita maviri ematombo matombo akave akarondedzerwa pane 111 Rocks yemigwagwa ye 915.
In dombo zvose zvinogumbura chokuita Castle Drábské Rooms vose vaikwira mabasa kuchengetedza tsika zvinoera wairambidza. Izvi zvinoshanda zvinhu akanyorwa Database of Czech Mountaineering Association: Drabske massif, Partisan, Drabske mbiru, zvina-shizha apila uye kuchamhembe uye kumabvazuva rusvingo neshongwe Dráb.